Uyini umsindo we-valve? Ngemuva kokuqalwa kwemoto, injini yenza “ukuchofoza” okunesigqi okufana nomsindo wensimbi ongqongqozayo, oshesha ngesigqi njengoba ijubane lenjini lenyuka. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, injini ngeke yenze lolu hlobo lomsindo isikhathi eside. Iningi le ...
Yiziphi Izinzuzo Zesistimu Yesikhathi Sokuguquguquka Kwevelufa Eguquguqukayo?
Kusukela kwavela injini, abantu abayekile ukumthuthuzela, futhi sibonile nezizukulwane zezinjini ezintsha ezinokususwa okuhlukahlukene kusuka kokukhulu kuya kokuncane. Ngokwanda kwezimoto, singene enkingeni yamandla esabekayo. , Uwoyela, insiza engavuseleleki, ihamba kancane ...
Ungabhekana Kanjani Nokwehluleka Kwe-Valve?
Lapho isithuthuthu sigibela isikhathi eside, imvume ye-valve yenjini ngokuvamile izovela, inkulu kakhulu noma incane kakhulu, ukuthola isizathu, udinga ukuxhumana nemininingwane eminingi, umphakeli we-valve yesithuthuthu ukukunikeza ukuhlaziywa okulula. Umthelela wokungavunyelwa kahle kwe-valve enjini La ...
Ungayikhipha Kanjani I-Valve Yenjini Yemoto?
Izingxenye zezimoto ezisebenza nge-valve imvelo inokhahlo, ukuthintana ngqo negesi, izinga lokushisa eliphakeme le-valve yokukhipha lingafinyelela ku-800 ℃, futhi ekugcineni komjikelezo wokuthambisa, kuhlanganiswe nomsebenzi we-valve lapho isenzo sokuvula nokuvala siba kaningi, izingxenye ze-valve zilula kakhulu ...
Ungayilungisa Kanjani i-Motorcycle Engine Valve clearance?
Lapho kugibele isithuthuthu isikhathi eside, injini ijwayele ukuba nemvume ye-valve enkulu noma encane kakhulu, enkulu kakhulu noma encane kakhulu, enkulu kakhulu noma incane kakhulu. Abantu abaningi abazi okuningi ngama-valve kungenzeka bangazi ukuthi lezi zinkinga zingadala ini, kanye ne-informa ...